Seychelles dia mandray ny sidina Maosko mankany Mahe
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Seychelles dia mandray ny sidina Maosko mankany Mahe
Seychelles welcomes Moscow flights
Seychelles dia nankasitraka ny fanambarana vao haingana momba ny fanombohan'ny sidina Aeroflot avy any Moskoa mankany Mahe, taorian'ny nitateran'ny firenena ranomasina Indiana andrefana ny fisokafan'ny sisintaniny tamin'ny 25 martsa 2021.
Ity zotra ity dia nanompo tamin'ny 1993 ka hatramin'ny Oktobra 2003 ary mampifandray ny toerana misy ny nosy amin'ny renivohitr'i Russia. Ankehitriny, manomboka amin'ny 2 aprily, i Aeroflot dia miverina miaraka amin'ny Airbus 330 (andiany 300) indray mandeha isan-kerinandro, amin'ny Zoma.
Ny sidina avy any Moskoa mankany Seychelles dia maharitra 8 ora 35 minitra ary hidina ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles amin'ny 9:55 maraina, fa kosa ny sidina miverina dia amin'ny 11:05 alina ary maharitra 8 ora 50 minitra.
Raha niresaka tamin'ny renivohitry ny nosy i Sherin Francis, Lehiben'ny Executive ao amin'ny Seychelles Tourism Board, dia nilaza fa faly tamin'ny fiverenan'ilay kaompaniam-pitaterana an-tanety any Seychelles.
“Faly izahay mandre fa hiverina any amin'ny nosinay i Aeroflot ho ampahany amin'ny fiverenan'ny sidina lavitra. Ireo sidina ireo dia azo antoka fa hanolotra safidy bebe kokoa ho an'ireo mpandeha Rosiana amin'ny resaka toeran-kaleha hitsidihan'izy ireo rehefa miverina tsikelikely ny dia iraisam-pirenena, fa ny tena zava-dehibe ho anay dia hanampy amin'ny famerenana indray ny fifandraisana azo antoka sy mivantana eo amin'ny firenena roa tonta, "hoy izy.
“Fotoana izao ary tsy andrintsika ny hitsenana ireo mpitsidika Rosiana antsika, satria i Russia dia iray amin'ireo tsenantsika ambony ary mitombo tsy tapaka isan-taona.
Nanampy i Ramatoa Francis fa nanantena ny Operations Tour Rosiana izy fa hanolotra fonosana manintona vitsivitsy ho an'i Seychelles mba hanentanana ny fivezivezena hiverina any amin'ireo nosy.
Aeroflot, ilay kaompaniam-pitaterana tokana hisidina mivantana avy any Rosia mankany Seychelles, dia tsy isalasalana fa hiatrika fifaninanana amin'ireo mpitatitra avy any Moyen Orient, indrindra ny Emirates sy Qatar izay samy efa nanohy ny sidina nankany Seychelles ary tena mety hampitombo ny fahita matetika.
Ireo fiaramanidina roa dia nameno ny banga nandritra ny taona maro ary nanome fifandraisana tsara teo anelanelan'ny teboka roa, raha tsy nisy sidina mivantana.
Amin'izao fotoana izao, Seychelles dia misokatra ho an'ny firenena 43 ihany, fa hatramin'ny 25 martsa, dia samy avela hiditra ireo mpizahatany vita vaksiny na tsy vita vaksiny. Ny hany tokana dia i Afrika atsimo izay tsy avela amin'izao fotoana izao.
Ny mpizahatany dia takiana amin'ny fandinihana COVID-19 PCR fitsapana ratsy nidina alohan'ny 72 ora alohan'ny fialana amin'ny toerana voalohany amin'ny dia. Tsy hisy karokantin hoentina rehefa tonga.
Ny fepetra mahazatra toa ny fanaovana marika, ny fanadiovana ary ny fanalavirana ny fiaraha-monina dia antenaina harahina amin'ny fotoana rehetra.
I Aeroflot dia iray amin'ireo zotram-piaramanidina efa ela niasana teto amin'izao tontolo izao ary naneho fahalianana hiverina any Seychelles hatramin'ny taona lasa, satria nitombo ny fangatahana mandeha any amin'ireo nosy Ranomasimbe Indianina.
Seranam-piaramanidina iraisampirenena maromaro no efa nanohy ny sidina nankany Seychelles raha ny hafa kosa nanomana ny daty hanombohany amin'ny volana ho avy.
Avy any Eoropa, Edelweiss sy Frankor Condor monina any Frantsa dia nanamafy ny asany tamin'ny volana aprily sy oktobra.
Air France dia mijery ny sidina fanombohana indray mankany Seychelles amin'ny volana Jona raha mijery ny fiverenan'ny tapaky ny volana aprily kosa ny Turkish Airline.
Ny mpitatitra iraisam-pirenena Israel ARKIA sy EL AL izay nitondra mpitsidika marobe tany amin'ny nosy faramparan'ny taona lasa dia samy nanamafy fa hiverina miaraka amin'ny sidina marobe anelanelan'ny volana martsa-aprily.
Avy any amin'ny faritra, mikasa ny hiverina any Seychelles i Air Mauritius amin'ny alàlan'ny charter hatramin'ny faran'ny volana Jona.
Ny fiaramanidina nasionaly ao amin'ny firenena, Air Seychelles, dia vonona hanohy ny sidina mankany Johannesburg sy Tel Aviv manomboka amin'ity volana ity ary mety ho any Maldives amin'ny volana Jolay. Nanomboka nampiroborobo ny sidina fizaran-tany mankany Dubai ny zotram-piaramanidina ny 26 martsa hatramin'ny 29 may 2021 ary antenaina fa hanohy ny sidina kasaina ho any Mumbai amin'ny 9 aprily.
COVID mandratra ny fiainana dia sy ny fizahan-tany any Afrika